XCMG QY20B kreenu na-eme ngwa ngwa na ngwa ngwa
Nsogbu onu: Xugong QY20B kreenu bugharia ngwa ngwa na ji nwayọọ nwayọọ。 nsogbu nkọwa: banye ụgbọ okporo ígwè na bugharia ngwa ngwa mgbe ngwa ngwa. Rịba ama na nrụgide dị n'akụkụ abụọ dị iche n'oge ọrụ ubi. Ihe kpatara nyocha: 1: nhazi ọnọdụ nke rotar ...
XCT25L5 enweghị ike ịgbatị ogwe aka atọ na anọ
Nrụrụ ọrụ nsogbu: XCT25L5 345 nkwonkwo aka enweghị ike ịgbasapụ description Nkọwa nsogbu: XCT25L5 enweghị ihe ọ bụla mgbe ọ na-agbatị ogwe aka abụọ wee gbatịa aka atọ ma ọ bụ anọ ma ọ bụ ise, ogwe aka abụọ na-agbatịkwa. Ihe nyocha nke ọdịda: ọdịda eletriki. Nchọpụta nsogbu ...
XCMG QY25K5-QY50K (tinyere QY50B) nke ogwe aka nke abụọ na ogwe aka atọ na ise anaghị agbanwe ụzọ.
Ihe na-ezighi ezi: XCMG QY25K5-QY50K (gụnyere QY50B) nke ogwe aka nke abụọ na ogwe aka atọ na ise anaghị agbanwe ụzọ. Nsogbu nkọwa: na ụgbọ ala abụọ ogwe aka mekotaonwe ejikari, atọ anọ na ise ogwe aka ike ịgbanwee telescopic. Nyocha gbasara ihe kpatara ya: 1 ...